ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၏ ယေးလ် တက္ကသိုလ် မိန့်ခွန်း မြန်မာ ဘာ ပြန် အပြည့် အစုံ | Freedom News Group
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၏ ယေးလ် တက္ကသိုလ် မိန့်ခွန်း မြန်မာ ဘာ ပြန် အပြည့် အစုံ
by FNG on September 29, 2012	Spring Flowers ၏ ဘာသာ ပြန်ဆို မှု ကို ၎င်း ၏ Facebook စာမျက်နှာမှ ကူးယူဖော်ပြ ခြင်း ဖြစ်ပါ
ဒါပေမယ့် စာသင်ခန်းထဲမှာ ဆရာတွေ သင်လေ့ရှိတဲ့ Rule of Law မျိုး မဟုတ်ပါဘူး ။ ဆရာတွေက ကျမထက်သာအောင် ပိုပြီး ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် ပြောနိုင်ကြမှာပါ ။ အခု ကျမက အဲဒီ Rule of Law
ဆိုတာကို ကျမမြင်တဲ့ ၊ မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေမြင်တဲ့ ပုံစံရယ် ၊ ဘာကြောင့် အဲဒါဟာ
ကျမတို့အတွက် အရေးကြီးသလဲဆိုတာကို ပြောချင်တာပါ ။
ပြည်သူ့လွှတ်တော် တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေး နှင့် တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကော်မတီ ဥက္ကဌ ( ဓါတ်ပုံ-ကိုမောပြေ)
၂၀၀၃ ဒီပဲရင်း ( Source : အင်တာနက် )
ဒီပဲယင်းတုန်းကဒေါ်စုကားကို မောင်းသော ကားဆရာ ( နာမည်က ကိုကျော်စိုးလင်းဟု ထင်ပါသည် ။ မှားရင် ပြင်ပေးကြပါရန် )
ကျေးဇူးရှင် ဂျွန်ယက်တော ။ သူလုပ်တာနဲ့ မဆီမဆိုင် ဟိုက နောက်ထပ် ( ၁၈ ) လ ထပ်ကျရတယ်လို့ ()း
John Yettaw အမှုဖြင့် တရားရုံးမှာ
From: ဘာသာပြန်	← လက်ပံတန်းတောင် ကြေးနီမိုင်း ရပ်ဆိုင်းမည့် အစီအစဉ် မရှိ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သမ္မတ ဖြစ်နိုင်ကြောင်း ဦးသိန်းစိန် ပြောဆို →
ဘ၀ ဆိုတာ မှောင်မိုက်တဲ့လမ်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ရင် အမေက သားတို့ရဲ့ဘ၀လမ်းမှာတွေ့ရတဲ့ တစ်ခုတည်းသော မီးပြတိုက်ပါ….. အမေ။
October 3, 2012	aungkoko	#
i believe myself,but i believe my leader(Daw Aung su kyi)morethan myself.she was the greatest person of mine.
October 1, 2012	့honey	#
September 30, 2012	Comments are closed.
FNG Facebook PageTotal Visitors:Since 16 December 2008	9,511,390 hits
I saw my reflection inaglass door of Michael Mann studio at Santa Monica, wow I was young enough. Photography by D… lnkd.in/bKVcdAu 1 hour ago
#Nelson Mandela should born and raise in Utah. lnkd.in/b-mPUbP2hours ago